Kapil Lamichhane | Nepali Stories
Kapil Lamichhane – Loktantrik Bus
कपिल लामिछाने- लोकतान्त्रिक वस
किसन काका एफ.एम. सुन्दै थिए । जिल्लाका हरेक गाउँमा लोकतान्त्रिक वस चलाइने कार्यक्रम रहेको समाचार सुनेर उनी खुसीले बुरुक्क उफ्रे । उनले भेटे जतिलाई ‘खुस खबरी’ सुनाए । – ए सुन्यौ हाम्रो गाउँमा लोकतान्त्रिक बस चल्ने भयो रे !
खबर सबैतिर फैलियो । टीकाटिप्पणी पनि सुरु भयो ।
– लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्रै हो । लोकतन्त्रमा आमजनताको सुखदुख हेरिन्छ भनेको यही हो ।
– वस चल्ने भो’ भने त्यसभन्दा पहिले त बाटो बन्ला नि ?
– ठीक भनिस् ! बाटो बन्ने भो’ भने हामीले काम यहीँ पाइहाल्छौं । कोरिया किन जाने ? अहँ ! म त यहीँ काम गर्छु, राष्ट्रनिर्माणको काम गर्छु ।
– बाटो बन्ने भयो हैन ? म त ड्याडलाई भनेर बाइक किन्छु ।
– म त बैंंकबाट लोन लिएर माइक्रो बस किन्छु, गाउँगाउँ घुमाउँछु र पैसा कमाउँछु ।
– म ? म त बेपार गर्छु । बेपारमा कमाइ छ । काठमाडौँबाट होलसेलमा सोझै सामान यहीं ल्याइपुर्‍याउँछु । धेरै नाफा हुन्छ ।
– म क्रसर इन्डस्ट्री खोल्छु । बाटो भएपछि विकास खुल्छ । घर बन्छन् । अफिस बन्छन् । स्कुलकलेज बन्छन् । रोडा, गिट्टी सबैलाई चाहिन्छ ।….
रामाश्रेचाहिँ कल्पना गर्दै थिए कि त्यो बस समावेशी खालको हुनेछ, एकले अर्कालाई सहयोग र सम्मान गर्ने खालको हुनेछ, महिला-वृद्ध र अशक्तलाई विशेष सुविधा हुनेछ, सफासुघ्घर हुनेछ, नयाँ टलक्क टल्केको, हिमाल, पहाड, तराई झल्केको … ।
साँझपख पनि चौतारीमा थुप्रै मानिस जम्मा भएर खुसी जाहेर गर्दै थिए । नयाँ नेपालको नयाँ सरकारलाई आभार प्रकट गर्दै र धन्यवाद दिंदै थिए । ‘नयाँ नेपाल भनेको यस्तो पो’ भन्दै थिए । किसन काका एफ.एम. सुन्दै त्यहीँ सामेल हुन आइपुगे । उनले रेडियोतिर देखाउँदै भने- सरी है सरी ! लोकतान्त्रिक बस हैन बहस भन्या रैछ यो ठाँडाले । लौ सुन-सुन फेरि त्यही भन्न लाग्या छ ।’
उनले एफ.एम.को भोलम बढाए । एफ.एम. भन्दै थियो- ‘जनतामा व्यापक जागरूकता अभिवृद्धि गर्न जिल्लाका हरेक गाउँमा लोकतान्त्रिक बहस सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
Posted in Kapil Lamichhane
Tagged Kapil Lamichhane - Loktantrik Bus Kapil Lamichhane's Nepali Story Loktantrik Bus Literary work of Nepali Story Writer Kapil Lamichhane Literatures of Nepali Story Writer Kapil Lamichhane Nepali Author Kapil Lamichhane Nepali Katha Nepali Katha Loktantrik Bus by Kapil Lamichhane Nepali Kathakar Nepali Kathakar Kapil Lamichhane Nepali Rachanakar Kathakar Kapil Lamichhane Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Kapil Lamichhane Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Kapil Lamichhane Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Loktantrik Bus by Kapil Lamichhane Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Kapil Lamichhane Sahityakar Kapil Lamichhane Ka Nepali Katha Haru